PAUL RABARY : « Tsy sitra-pon’olon-tokana no hatao eto amin’ny tany sy ny firenena »
Nambaran’ny mpandinika fiarahamonina izay sady kandida nilatsaka ho filoham-pirenena, Paul Rabary fa efa dingana vaovao izao no iainan’ny firenena izao taorian’ ireny latsa-bato nataon’ny vahoaka ireny. 6 janvier 2019
Tsy azo lavina tokoa fa kihon-dalana lehibe ho an’ny firenena ny firosoana tamin’iny fifidianana teo iny. Manoloana izany sy manoloana ny famoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na HCC ny vokatra ôfisialy rahampitso indrindra dia nanambara ity mpandinika fiarahamonina ity fa « tokony hoekena ny didy avoakan’ny HCC na inona na inona hambarany eo rahampitso ». Isany nisongadina nandritra ny fivahinianany niaraka tamin’ny solombavambahoaka Tinoka Roberto tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray teto an-drenivohitra ny filazany fa : « tsy sitrapon’olon-tokana no atao eto amin’ny firenena fa ny sitrapon’ny daholobe ». Notsipihiny fa io sitrapon’ny daholobe io dia tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny fanekena ny vokatr’izany.
Tsy tokony hiverina intsony, hoy ity kandidà ity, ny famerenana ny zava-nisy tamin’ny taona 2002 ary tsy tokony hakorontana intsony ny vahoaka satria efa ireny niaraha-nahita ireny ny zava-doza naterak’izany. Efa ezaka goavana araka ny nambaran’Andriamatoa Paul Rabary ny nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Céni tamin’ny fikelezan’aina namoaka ny vokatra vonjimaika niandraiketan’izy ireo, ka tsy tokony hotsinontsinoavina. Isan’ny nitondrany fanazavana ihany koa ny elanelam-bato izay mahatratra dimy hetsy mahery teo amin’ny kandidà roa tafakatra tamin’ny tamin’ny fihodinana faharoa ary nambarany fa tsy tokony hahagaga izany satria izany no taratry ny safidim-bahoaka.